रुरु जलविद्युतको आईपीओ ३७ हजार ९१६ जनाले पाए, कतिबाट काराेबार सुरू हाेला ? – Samacharpati Samacharpati रुरु जलविद्युतको आईपीओ ३७ हजार ९१६ जनाले पाए, कतिबाट काराेबार सुरू हाेला ? – Samacharpati
रुरु जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) ३७ हजार ९१६ जनाले प्राप्त गरेका छन् । आईपीओ पर्नेहरुले १०/१० कित्ता सेयर पाएका छन् ।
१०/१० कित्ता बाँडफाँट गरेर बाँकी रहेको ७ कित्ता थप ७ जनालाई एक/एक कित्ताका दरले वितरण गरिएको छ । रुरुको आईपीओमा कुल १६ लाख ८३ हजार १२१ आवेदन परेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि कुल ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्ता सेयर बिक्रिमा राखेको थियो ।
त्यसमध्ये ८ हजार १५४ कित्ता कर्मचारीलाई, २० हजार ३८५ कित्ता सामुहिक लगानी कोष र बाँकि ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ता सर्वसाधारणको बिक्रीका लागि खुला गरिएको थियो ।
शुक्रबार रुरुको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको कार्यालयमा गोलाप्रथाबाट आईपीओ बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीले २० चैतबाट प्रतिसेयर १०० अंकित मूल्यमा २० रुपैयाँ पि्रमियम थप गरी कुल १२० रुपैयाँमा सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो ।
यतिबेला रुरुको सेयर नपरेका हरु निराश भएका छन् भने सेयर परेका हरु सबैले यसको दोश्रो बजारमा कति रुपैयाबाट कारोबार सुरु होला भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।